केपी ओली ‘कायर’ हुनः गगन थापा
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सँगै बसेर संविधान पढ्न तयार रहेको बताएका छन्। ‘प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो धनगढीमा गएर संविधान पढ भन्नुभएको रहेछ। कमरेड ओली, आउनुस् ! पढौँ संविधान। तपाईं मैदान छाडेर भागेर लुकेर बस्नुभएको सुवास नेम्वाङलाई लिएर आउनुस्, म संविधान ढोगेर जारी गर्ने पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादवलाई लिएर आउँछु, खुलामञ्चमा सँगै बसेर संविधान पढौँ,’ काठमाडौंको कपनमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको भन्दै नेता थापाले पुनस्थापना हुने धारणा राखे। ‘प्रधानमन्त्रीले सोध्नुभएछ, कसले भन्या ? संसद् पुनस्थापना हुन्छ भनेर। यी मैले भन्या, सुन्नुभएन ? सुवास नेम्वाङले भनेको, सुन्नुभएन ? अग्नि खरेलले भनेको, सुन्नुभएन ? संविधान बनाउने मानिसहरूले भनेको, सुन्नुभएन ? पूर्वन्यायाधीशहरूले भन्नुभएको, सुन्नुभएन ?,’ उनले प्रश्न गरे।
जनमतको अपमान गर्ने काम प्रधानमन्त्रीबाटै भएकाले सरकारले सजिलै चुनाव गराउँछ भनेर उत्साहित हुनुको अर्थ नभएको थापाको भनाई छ। ‘चुनाव हुन्छ तर यो सरकारले गराउँदैन। संसद पुनस्थापनापछि यो सरकार हट्छ। राष्ट्रपतिलाई पनि शीतलनिवासबाट बिदा गर्छौ। अनि जुन-जुन चुनाव हुनुपर्ने हो त्यतिबेला हुन्छ,’ थापाले भने। उनले प्रधानमन्त्रीले आफ्नै घर जलाएर खरानीको टीका लगाएर देश दौडाहामा हिडेको आरोप समेत लगाए।
उनले प्रधानमन्त्री ओली ‘क्रान्तिकारी’ नभई ‘कायर’ व्यक्ति भएको आरोप पनि लगाए। नेता थापाले संविधान र लोकतन्त्रको कदर नगर्ने व्यक्ति क्रान्तिकारी नभई कायर सावित हुने बताए।